Addis Abeba – Oct. 10/2017 (Addis Standard) – In an urgent statement released to the media this afternoon, the federal government communication affairs bureau issued a stern warning to the Somali regional state communication bureau to stop publishing and distributing inciting messages immediately. According to the statement, at such a time when the Oromia and Somali […]
Waan sammuu Abbaa Duulaa jijjiiree dhageeffadhaa
The qeerroo on their way back to home from #Irreecha2017 at Malkaa Ateetee. Freedom is sweet @Lolchu pic.twitter.com/VTYr7iLzKe — Girma Gutema℠ (@Abbaacabsa) October 8, 2017
KUN OBBOLAA 3n #HARGEESSATTI LIYYUU POLISIIN GUBEDHA Kan kun hojii nama hin gallakisiifne kamtu nama gallakkisisa? Abbaa duulaa Gammadaa nama sammuu qabudha. Gochi suukkaneessan kun Xalayaa hojii gallakkisuu galchuu miti Bosonayyui nama galcha. Keewwata 39 gaafachuu hin qabnuun hin dalagu. Itoophiyaa akkasitti dhaabitti nu gubdu bittimsuudhaaf miirri ittin tasgabboofnu hin jiru. Itoophiyaa dimokiraatessinee Urkuzoota akka […]